Nyi Nyi Latt: Hacker ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းများ.....
Nyi Nyi Latt
اسلام عليكم ور حمت الله وبر كته
IT ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် နည်းပညာ
သင်္ချာ or Mathematics အခမဲ့သင်ရအောင်....
၁၈နှစ်အောက် မကြည့်ရဆိုဒ်များအတွက် သီးသန့် Search Engine လွင့်တင်
ShweMoney.com မှ Paypal အကောင့် ပြုလုပ်ခြင်းအား သီးခြား ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ပေးမည်
ကွန်ပျုတာထဲမှာ ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ MP3- MP4 ..အလွယ်တကူ ပြောင်းနည်း
Google Play က ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ App တွေကို Free ရယူပေးမယ့် Freedom Google Play APK 0.7.8
Google တို့ ဝင်ငွေရပုံရနည်း
ကွန်ပျူတာSystem အမှားတွေကိုအော်တိုပြင်ပေးနေတဲ့ ASC
်facebook အကောင့် ဟက်(Hack)ခံရလျှင်
ဟစ်ဂျရီ ၁၄၃၄ ခုနှစ်
ည ဝ၇ နာရီ ၄၁ မိနစ်
U S B
free မြန်မာ photoshop
myanmar I T shop
Myanmar IT Development
နည်းပညာများနဲ့ ဆော့ ဖ်ဝဲကမ္ဘာ
စက်တိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်......
Hacking လျှို့ ဝှက်ချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောပြခြင်း...
Blogger များနှင့် Cyber အတိုက်အခံသမားများအတွက် လက်...
ဖိုင်များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာတခြားမဆိုင်သူ မဖတ်စေခ...
ဒုက္ခပေးနေတဲ့ အက်ဒ်ဝဲ (Adware) အကြောင်း
Window 8 .....???
Need For speed (car game)
slideshow ပြလို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝလ် ......
wifi Hack သူများအတွက်.....
AGE OF EMPIRES III + SERIAL....
Warlock Master of the Arcane RELOADED 880MB....
internet download manger 6.12
Internet Download Manger ကိုမြန်အောင်လုပ်ကြရအောင်....
Fruit Ninja HD For PC (2012) (game)
Active Desktop Calender Software
Windows7အသံထွက်ဖို့
မိမိ gtalk ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ
Hacker ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းများ.....
ကွန်ပျူတာSystem အမှားတွေကိုအော်တိုပြင်ပေးနေတဲ့ ASC...
ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို ခေါင်းဖြတ်ဆက်ပြီး လူစားထိုးတဲ့ဆေ...
flash song လုပ်ချင်သူများအတွက်MP3 ဆိုဒ်ငယ်အောင်လုပ...
အလွယ်ကူဆုံး window admin password ကို ဖျက်ကြည့်ရအေ...
Gmail Hacking လုပ်ရာတွင် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သော ဖိုင် ...
Photo,Mp3,Video တွေကိုချူံ့ သည့် Format Factory So...
Remove Facebook Timeline for yourself
ကိုယ့်ကွန်ပျုတာကို hotspot အဖြစ်အသုံးပြုနည်း....
Hack ချင်သူများ သတိထားပါ။
ဘလောဂ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ သူတွေက...
Google SketchUp Pro v7.1.6087
Nokia theme များ.......
Corel MotionStudio 3D 1.0 (latest version)
သူငယ်ချင်းများအတွက် ကောင်းတာလေးတွေရတော့လည်း အလိုရှိသူတိုင်းသုံးစေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့Softwares ကောင်းလေးတွေကို ထပ်မံဝေငှပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ...
သင်္ချာ သင်လေချာလေချာတဲ့ သင်္ချာပါဘဲ ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူမပါရင်မပြီးတာလဲ သင်္ချာပါဘဲ ဆိုတော့ သင်္ချာက နေရာတိုင်းမှာပါနေတဲ့ အတဲ့အပြင် အထူးသ...
၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရ Pornographic ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက် သီးသန့် Search Engine (http://search.xxx/) လွင့်တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်း...
iphone/ipad/ipod ပျောက်ရင်၊အခိုးခံရရင် စိတ်မပှုပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်နေကျ James Bond (007) movie ထဲ ကလိုမျိုး ရန်သူဘယ်ရောက်နေပြီးလဲဆိ...
ShweMoney.com မှ Shwe Money Virtual VISA Card အသုံးပြုသူများအတွက် PayPal အကောင့်ပြုလုပ်ခြင်း အားသီးခြား ၀န်ဆောင်မှုအဖြစ် အခကြေး ငွေယူ၍ဆော...
ဒီနည်းလေးကတော့ ရုံးမှာ သုံးတဲ့သူတွေ ပြောင်းတဲ့ဆော့ဝဲ မရှိတဲ့အခါတွေမှာ သုံးလို့ အဆင်ပြေပါတယ် ဘာဆော့ဝဲမှာမလိုပဲ အလွယ်လေးနဲ့လိုအပ်သလို ...
Freedom Google Play APK 0.7.8 ဟာ Google Play က ပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ်ရတဲ့ App တွေကို Free Download ချလို့ရမယ်လို့ သိရပါတယ်.. ဒီ App ကို မစမ်းရ...
Google ရဲ့  ငွေရပုံရနည်းက Google စီအီးအိုကပဲ အားလုံး သိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ End User ဘက်က မြင်ရသလောက်လေး အနည်းငယ် မျှဝေရုံလေး သက...
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆော့ဝဲလေးကတော့အရမ်းကောင်းပါတယ် ကွန်ပျူတာရှိတဲ့သူတိုင်းတင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါအမှားတွေ Tempဖိုင်တွေကိုလည်းဖျက်ပေးပါတယ...
Facebook မှာ သတိမရှိတဲ့သူတွေသာ ဟက်ခံရတတ်မြဲပါ။ အကောင့်တစ်ခုကို ဟက်တဲ့အပုိုင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အခြေအနေအထားအရပါ။ နှစ်ပိုင်းခွဲပြ...
Certified Ethical Hacker v6 Training ဆိုတဲ့ DVD လေးပါ။ level အလိုက် အဆင့်ဆင့် သင်ခန်းစာများ ပါဝင်ပါတယ်။ စကားပြော၊ စာသား၊ သရုပ်ဗီဒီယိုများ ပါဝင်ပါတယ်။ အတူတကွလိုက်လုပ် နိုင်တာဆိုတော့ အီးဘွတ်တွေ ဖတ်တာထက် အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ အရမ်းအားစိုက်စရာလည်းမလိုဘူးလေ။ တကယ်ကြိုးစားတဲ့လူတွေအတွက် ဖြစ်ချင်တာတွေ တကယ်ဖြစ်ဖို့ အကူအညီ အများကြီးရပါလိမ့်မယ်။
Rapidshare က နှစ်နေရာ၊ torrent နဲ့ တစ်နေရာ တင်ပေးထားပါတယ်။ မိမိအဆင်ပြေတာ တစ်ခုကို ဒေါင်းပေါ့။ Rapidshare က ဖိုင်များတယ်ဆိုပေမယ့် ကျနော် အရင်ပေးခဲ့တဲ့ Rapidshare Auto Downloader နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ Free Rapidshare နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဒေါင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
Download Here (mirror 1)
Download (mirror 2)
Flash သီချင်းလေးတွေကိုနှစ်သက်လို့ အကြင်နာနန်းတော် မှကူးယူလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။သီချင်းနားထောင်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စာကြောင်းလေးပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ. ဒေါင်းချင်ရင် သီချင်းအမည်ပေါ်မှာ Right Click, Save Link As ကိုနှိပ်ပါ။
Copyright © 2012 Nyi Nyi Latt.